Bolt Factory - Mpanamboatra China, Bolt
Izahay dia manome tahiry marobe din931 hex. Ireo bolon-doha hex ity misy kofehy vita amin'ny kofehy ary misy kofehy manaraka ny halavany manontolo, araka ny DIN 931 sy DIN 933, dia natao zato ho fiarovana fiarovana.
Product Product Hot Dip Galvanizing hex bolt habe M2-M160 Material baibina vita amin'ny vy, Stainless vy, Araka ny takianao. Kilasy sokajy: 4.8 6,8 8.8 10.9 12.9 Vaha-vita amin'ny faran-java-manakaiky vita amin'ny voromahery, nampitahaina, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, araka ny fangatahanao. DIN GB ISO JIS BS ANSI Certification ISO9001, SGS, OEM tsy manara-penitra OEM dia misy raha manome sary na santionany ianao. Package Standard packing exporting na araka ny takian'ny mpanjifa ...
Omeo anarana ny mpanamboatra Fastener manokana bolt anti-theft bolt ary nut Mark Araka ny takian'ny mpanjifa. Vatosoa matevina, vy vita amin'ny karbonina vita amin'ny plastika, plated zinc, mainty kalitao ambony indrindra kalitao avo lenta Anticorrosive Performance Salt Spray Test dia mahatratra 1000-2000 Ora ny fampiharana ny mari-trano, indostrian'ny simika, tontolo iainana, fanamarinana trano ISO9001 2008 fonosana fonosana sy ny paleta na araka ny takian'ny mpanjifa. Fotoam-pandefasana mahazatra amin'ny 15 ...
Izahay dia manome tahiry marobe din931 hex. Ireo bolon-doha hex ity misy kofehy vita amin'ny kofehy ary misy kofehy manaraka ny halavany manontolo, araka ny DIN 931 sy DIN 933, dia natao zato ho fiarovana fiarovana. marika: JiuHe M16 habe din931 hex bolt, M20 savaivaly din931 bolt, M24 din931 standard hex bolt, m30 din 931 hex bolt, samy manana tahiry. Ampiasaina be amin'ny faritra rehetra amin'ny indostrian'ny ankapobeny.